Lahatsoratra 94 552 amin’ny teny malagasy
Mobutu Sese Seko dia mpanao politika sy maresaly sady filohan’i Zaira teo anelanelan’ny taona 1965 sy 1997. Repoblika Demôkratikan'i Kôngô, teraka tao Lisala ny 14 Ôktôbra 1930 ary maty ny 7 Septambra 1997 tao Rabat. Joseph Désiré Mobutu no tena anarany, nefa nomena ny anarana hoe Sese Seko Kuku Ngbendu Waza Banga izay midika hoe “mpiantafika mandresy hatrany tsy azo sakanana” izy.
Manamboninahitra tsotra tao amin’ny tafiky ny mpanjanatany belza i Mobutu teo anelanelan’ny taona 1948 sy 1956. Taorian’izany dia lasa mpanao gazety izy.
Nikambana tao amin’ny Mouvement national congolais izay naorin’i Patrice Lumumba i Mobutu tamin’ny taona 1958. Nandray anjara tamin’ny "latabatra boribory" natao tao Bruxelles tamin’ny volana Janoary 1960 izay niteraka ny fahaleovan-tenan’i Kôngô izy. Sekreteram-panjakana tao amin’ny governemantan’i Lumumba (izay piraiminisitra) izy ary notendrena ho lehiben’ny etamazôro tamin’ny volana Jolay 1960 rehefa avy nasondro-boninahitra ho kôlônely. (tohiny...)
Talata, 18 Janoary 2022
Mbola tsy misy ankehitriny ny pejy mikasika ny Talata 18 Janoary ao amin'ny efemerida. Ka raha tianao dia azonao ampiana na foronina ity pejy ity.